UPDATE: Khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay G/Mudug & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Warar Cusub UPDATE: Khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay G/Mudug & Wararkii ugu dambeeyay
UPDATE: Khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay G/Mudug & Wararkii ugu dambeeyay
Mudug (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya dagaal geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kaasoo deegaanka Shabeellow ee duleedka Magaalada Bacaadweyne ku dhexmaray Dadka deegaanka iyo Ururka Al-Shabaab.
Ilaa iyo 7 qof oo uu ku jiro Macallin Dugsi Quraan ayaa ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaanka Shabellow, sida ay warbaahinta u sheegeen Saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka maamulka Galmudug.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya, in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka baxeen deegaanka, kadib markii dagaalka ay ku soo biireen ciidamo ka tirsan qeybta 21aad oo gacan siinayay dadka deegaanka.
Xaalada deegaanka Shabeellow ee Bariga Gobolka Mudug ayaa hadda degan, iyada oo Ciidamada Dowladda ay howlgallo ka wadaan.
Dagaal gobolka Mudug